Ihe mgbochi: Gịnị bụ bọtịnụ-maka-weebụsaịtị na Darodar Bọọlụ Oleekwa otú iji gbochie ha?
Mgbe ị na-aga na akụkọ nchịkọta Google Analytics, otu n'ime ihe ndị ị ga-ahụ bụ isi iyi nke okporo ụzọ. Mgbe ụfọdụ, ụfọdụ n'ime isi mmalite nwere ike ịmepụta ọtụtụ okporo ụzọ karịa ndị ọzọ. Site n'ilekwu anya, onye nwere ike ịchọpụta na nọmba ndị a sitere na abụọ ndị a: darodar.com, na bọtịnụ-for-website.com - tennis court builders price. E wezụga na ha na-apụta na akụkọ GA, enwere ohere na ị nwere ike ị nụtụbeghị banyere saịtị ndị a na mbụ, na-achọ ịmata ihe mere ha ji eweta ọtụtụ okporo ụzọ.
Iji chịkọta nke a, ngalaba abụọ ahụ jiri ụzụ a maara dị ka spam na-edekọ ihe. Max Bell, ọkachamara ọkachamara Semalt , na-akọwa na echiche n'azụ spam na-ezigara bụ saịtị ahụ iji nyefee ọtụtụ njikọ gaa na otu ngalaba site na otu saịtị ha chọrọ ịkwalite. Mgbe search engines na-agba na ndekọ, ha na-ahụ ndị a na-akpọ ma na-agụnye ha na akụkọ ikpeazụ. Ihe dị ala na nke a bụ na ọ dịghị okporo ụzọ ọ bụla dị irè ma nwee ike ịgbanwe ụzọ onye na-eme mkpebi maka weebụsaịtị.
Ebe ọ bụ na njikọ niile na-alaghachi n'otu saịtị, onye nwe ya nwere ike ịchọ ịmata ihe mere saịtị ahụ ji akọwa okporo ụzọ. Ozugbo ha pịa na URL na akụkọ GA, ọ na-ebute ya na ebe nrụọrụ weebụ na-akọwa ihe, nke ahụ wee sụgharịa dịka nleta ọhụrụ. Maka spamming saịtị ahụ, ọ na-esi n'aka ndị na-enweghị obi bụ ndị organic.
O di nwute, enweghi ihe iyi egwu di na website. Dịka e kwuru na mbụ, ọ na-eme ka ihe niile data gbasara gbasara okporo ụzọ gaa na saịtị ahụ ebe ọ bụ na ọ na-ezigara ọnụ ọgụgụ ahụ. Nsonaazụ bụ akụkọ na-adịghị mma nke na-adịghị ese onyinyo nke ihe na-aga n'ihu na saịtị ahụ. Dịkarị, ọnụego bounce dị 100% na oge efu efu.
Ọ ga-adị mkpa iji gbochie mkpokọta bọtịnụ na ebe darodar ka ị nweta akara ngosi kariri nke arụmọrụ nke saịtị ahụ. Ihe ka ukwuu n'ime isiokwu ndị metụtara ikpochapụ nsogbu ahụ na-akọwa ojiji nke atụmatụ "Bot Filtering" dị ọhụrụ na Google Analytics. N'okpuru Ntọala Ntọala, Google gbakwụnyere igbe nlele dị mfe nke onye ọrụ nwere ike ịhọrọ ịlele ma ọ bụ hapụ ya. Site na ahụmịhe na nhọrọ a, njedebe nke isiokwu a na-ewere na bot nzacha nhọrọ anaghị ehichapụ mmadụ abụọ na-akpọ spammers: darodar..com, na buttons-for-website.com.
Ụzọ kachasị mma iji gbochie bọtịnụ-maka-ebe nrụọrụ weebụ na darodar si eweta nkata okporo ụzọ bụ iji nhazi nhazi. Jiri usoro na-esonụ:
1. Mepee Google Analytics wee pịa Admin tab.
2. Nhọrọ nhọrọ nke na-apụta na kọlụm kwesịrị ekwesị kwesịrị ịmepụta submenu ebe e nwere ngwa "Mepụta New View." Ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ banyere okike nke nhazi nhazi na-ele anya na na njedebe nke usoro ahụ, a ka nwere echiche na-enweghị atụ nke nwere ihe ndekọ data niile iji tụnyere ya.
3. Nye nyo a aha.
4. Na Ntụkọta taabụ, họrọ Nhọrọ New Filter.
5. Jiri aha mara mma maka nhazi ọhụrụ.
6. Ụdị ntanetị kwesịrị ịbụ Omenala.
7. Jiri Ntuziaka na ntinye Filter n'okpuru Ekpuchi ma tinye aha nke onye mbụ na-ezo (mkpokọta bọtịnụ).
9. Tinyegharịa site nzọụkwụ 5 maka darodar.com.